Oganda - Wikipedia
Sainam-pirenen' i Oganda
I Oganda eo anivon' i Afrika
I Oganda dia firenena ao Afrika Atsinanana, manana velaran-tany mirefy 241 038 km². I Kampala no renivohiny. Tsy manana morontsiraka i Oganda, nefa ny antsasaky ny ny farihy Victoria (izay farihy lehibe indrindra aty Afrika) dia mandrakotra ny ao amin' ny tapany atsimo. Lembalemba avo no mamorona ny vohon' ny tany, izay manana salan-kaambo 1 200 m. Ao andrefana no ahitana ny tangorom-bohitr' i Ruwenzori izay manana tampona any amin' ny 5 109 m. Manondraka an' i Oganda ny ony Nily (na Neily) sy ireo rantsany. Ny tapany atsimo dia anjakan' ny hivoka anirian-kazo fa ny afovoany sy ny andrefana kosa dia rakotra ala.
Vahoaka banto no maro anisa amin' ny mponina ao Oganda, nefa ahitana vahoaka nilôtika avy amin' ny lohasahan' ny ony Nily ihany koa ao. Monina ambanivohitra ny ampahany be amin' ny mponina. Kristiana ny ankamaroan' ny vahoaka ogandey.
Miankina be amin' ny fambolena sy ny fiompiana ny toekaren' i Oganda: anisan' ny volena any ny mangahazo sy ny kafe ary ny landihazo. Ny taozavabaventy dia miompana amin' ny fanodinana ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ho sakafo. Manana otrik' angovo lehibe i Oganda noho ny fisian' ny riamben' i Owen eo amin' ny ony Nily.
Sarin-tanin' i Oganda
Zanatany britanika taloha i Oganda fa efa nahazo ny fahaleovan-tenany tamin' ny taona 1962. Mpikambana ao amin' ny Commonwealth izy ary ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialiny.
1 Tantaran' i Oganda
1.1 Talohan' ny fahaleovan-tena
1.1.1 Ireo fanjakà-mpanjaka tany aloha
1.1.2 Ny fanjanahan-tany britanika
1.2 Ny fahaleovan-tena
1.2.1 Ny nahazoana ny fahaleovan-tena
1.2.2 Naongan' i Milton Obote ny mpanjaka
1.2.3 Naongan' i Idi Amin Dada i Milton Obote
1.2.4 Voafidy ho filoham-pirenena i Milton Obote
1.3 Ny fitondran' i Yoweri Museveni
1.3.1 Fanavaozana ara-pôlitika sy fanitsiana ara-toekarena
1.3.2 Lany ho filoham-pirenena i Yoweri Museveni
1.3.3 Ny fidirana an-tsehatry ny miaramila tany Repoblika Demôkratikan' i Kôngô
1.3.4 Fihenjanan' ny fitondrana sy fiharatsian' ny fandriam-pahalemana
1.3.5 Fahalanian' i Yoweri Museveni mifanesy sy fangejana ny fanoherana
2 Jeografian' i Oganda
2.1 Jeôgrafia fizika
2.1.1 Ny vohon' ny tany sy ny rano
2.2 Ny mponina sy ny biby ary ny zavamaniry
2.2.1 Ny biby sy ny zavamaniry
2.3.1 Ny fambolena sy ny fiompiana
2.3.2 Ny angovo sy ny harena an-kibon' ny tany ary ny taozavatra
2.4 Fifanakalozana sy fitaterana
2.4.1 Ny fifanakalozana amin’ny any ivelany
2.4.2 Ny fifamoivoizana
Tantaran' i Oganda[hanova | hanova ny fango]
Talohan' ny fahaleovan-tena[hanova | hanova ny fango]
Ireo fanjakà-mpanjaka tany aloha[hanova | hanova ny fango]
Nisy fitaovana vita amin’ ny vato tao amin’ ny tendro ihaonan' ny ony Congo sy Nily, aty aorian’ ny farihy Edward, vavolombelon’ ny fisian' ny olombelona voalohany tany amin’ ny 1 500 000 taona lasa. Tamin’ ny fiantombohan’ ny fanisan-taona iraisana dia nahasarika mpamboly banto sy mpiompy nilôtika ny faritry ny Farihy Lehibe. I Boinôrô (Buynoro) izay fanjakà-mpanjaka lehibe voalohany dia niorina tamin’ ny taonjato faha-15. Tamin’ ny fiafaran’ ny taonjato faha-17 dia nikorontana vokatry ny fisian’ ny ady maro ny fankana Boinôrô, ka nanambara ny fahaleovan-tenan' ny faritra nofeheziny ny governoran’ ny faritanin’ i Boganda (Buganda). Ity fanjakana vaovao ity, dia lasa nanana ny maha izy azy haingana tao amin’ ireo fanjakana manodidina azy. Na dia teo izany heriny izany dia tsy afaka nanjakazaka tanteraka tamin’ ireo fanjakana hafa, toy ny fanjakan' i Ankôle (Ankole) na Nkôle (Nkole) sy ny Tôrô (Toro), ny fanjakan' i Boganda.
Ny fanjanahan-tany britanika[hanova | hanova ny fango]
Ireo mpahita tany britanika izay nitady ny loharanon’ i Nily no Eorôpeana voalohany niditra tao Oganda. Ny mpanjaka Mutesa I, izay nanjaka teo anelanelan’ ny taona 1852 sy 1884, dia nandray an’ i John Hanning Speke, avy eo nandray an' i Henry Morton Stanley izay nikasa ny hitory ny Filazantsara (na Evanjely) tao. Tamin’ ny taona 1879 no nahatongavan’ ny misiônera voalohany tao Boganda.
Folo taona latsaka taty aoriana dia nanjakan’ ny ady an-trano io faritra io. I Britaina Lehibe, mpifanandrina tamin' i Alemaina tao Afrika Atsinanana dia nisahirana amin’ ny fiarovana ity tany mpifanila vodirindrina amin’ i Kenia ity tsy ho azon’ i Egipta sy ny finoana silamo. Noho izany dia niditra an-tsehatra ny Britanika mba hampitsahatra izany ady izany. Nosoniavin’ i Mwanga (zanak’ i Mutesa I) ny fifanarahana amin’ ny maha ambany fiarovana (prôtektôrata) ny taniny. Nentin’ ny Britanika ny tafik’ i Boganda mba hamabo ny fanjaka-mpanjaka manodidina. Vokatr’ izany dia niitatra ka nahafaoka ny fanjakan’ i Tôrô sy ny an’ i Ankôle ny prôtektôrata. Nanana ny sata mifehy azy manokana i Boganda, izay efa nandray ny kristianisma tany aloha, fa ireo fanjakana hafa dia voazanaka amin’ ny fomba mivantana kokoa.
Tonga niaraka tamin’ ny fametrahana ny lalam-by tao Afrika Atsinanana ny Indiana hanamboatra azy izay niorim-ponenana mba hisahana raharaham-barotra rehefa vita ny lalam-by. Ny rafitra niainan’ i Boganda dia nitohy hatra aty aorian’ ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny fahaleovan-tena[hanova | hanova ny fango]
Ny nahazoana ny fahaleovan-tena[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin’ ny taona 1945 dia nihamahery vaika ny fitakiana ny fahaleovan-tena tao Boganda izay niseho teo anelanelan’ ny Ady Lehibe roa. Tamin’ ny taona 1953 dia nitaky hahazo fahaleovan-tena manokana ny mpanjaka Mutesa II ka natao sesitany tany Lôndra mandritra ny telo taona. Tamin’ ny taona 1962 dia niafara amin’ ny fahazoan’ i Oganda fahaleovan-tena ny fifampiraharahana lava natao. Ny vahaolana noraiketina tao amin’ ny lalàmpanorenana voalohany, izay manaraka ny rafitra federaly, dia nanambatra ireo fanjakà-mpanjaka efatra teo aloha, nefa nihazona ny lanjany manokana i Boganda (Buganda). Ny mpajaka Mutesa II dia lasa filoham-pirenena mandra-pahafatiny. I Milton Obote, mpanorina ny antoko Uganda People’s Congress (UPC) tamin’ ny taona 1960, no lasa piraiminisitra. Ny UPC no antoko pôlitikan’ ny vahoaka nilôtika any avaratra, izay nanohitra ny fanjakazakana ara-toekarena sy ara-pôlitikan' i Boganda, ka nankasitraka ny fivangongoam-pahefana. Nanomboka tamin’ izay dia nitombo ny disadisa teo amin’ ny Avaratra nilôtika izay betsaka Prôtestanta sy Silamo, sy ny Atsimo banto izay betsaka Katôlika.
Naongan' i Milton Obote ny mpanjaka[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ ny volana Mey 1966, mba hanamafisana ny fivangongoam-pahefana, dia nandefa ny tafika tao Boganda ka nanais otra tamin’ ny toerany ny mpanjaka i Milton Obote. Nanampy an’ i Milton Obote tamin’ izany ny lehiben’ ny etamazôro Idi Amin Dada, izay isan’ ny foko madinika silamo vitsy an’ isa ao avaratra-andrefana. Tamin’ ny taona 1967 i Milton Obote dia namoaka lalàmpanorenana vaovao, izay nanafoana ny fanjakà-mpanjaka sy nanorina fitondrana ananan’ ny filoham-pirenena fahefana lehibe ary nandidy ny fisian’ ny antoko pôlitika tokana.
Naongan' i Idi Amin Dada i Milton Obote[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ ny volana Janoary 1971 dia nanararaotra ny tsy maha eo an’ i Milton Obote i Idi Amin Dada ka naka ny fitondrana tamin’ ny fanonganam-panjakana. Nampitomboiny ny isan’ ny miaramila, nampanjakainy ny fampihorohoroana. Manodidina ny 200 000 ny olona matiny. Tamin’ ny taona 1972 dia noroahiny ny Aziatika miisa 100 000 any ho any (ny 50 000 dia Indô-Pakistaney). Tamin’ ny taona 1978 dia saika banky ropitra i Oganda ka niankin-doha tamin’ ny trosa nomen’ ireo firenena miozolmàna mpankasitraka an’ i Idi Amin Dada. Nitaky ny faritra ao Tanzania manamorona ny sisin-tany manasaraka an’ i Oganda amin’ io firenena io i Amin Dada ka naniraka ny tafika ogandey hanani-bohitra tamin’ ny volana Novambra 1978. Nahatonga an’ i Tanzania hiditra an-tsehatra amin’ ny ady izany. Nandositra tany Libia sy tany Arabia Saodita nahafatesany amin’ ny taona 2003 i Amin Dada. Nanamora ny fametrahana indray fitondrana sivily ny filoham-pirenena tanzaniana Julius Nyerere.
Voafidy ho filoham-pirenena i Milton Obote[hanova | hanova ny fango]
Nitohy anefa ny korontana ka taorian’ ny fifandimbiasan’ ny filoham-pirenena telo (Amin Dada sy Yusuf Lule ary Godfrey Binaisa) vao tafaverina teo amin’ ny fitondrana indray i Milton Obote tamin’ ny fifidianana nandraisan’ ny antoko UPC anjara tamin’ ny volana Desambra 1980. Tamin’ ny taona 1981 dia niharan' ny famaizina mafy ny mpanohitra. Niisa 100 000 any ho any ny Ogandey maty novonoina sy matin’ ny mosary.
Roa loha ny mpanohitra an’ i Milton Obote, dia ireo miaramila mpanao vy very ny ainy (kômandô) tsy niala amin’ i Amin Dada tao Avaratra, sy ny National Resistance Army (NRA) tao Bangada Atsimo izay notarihin’ i Yoweri Museveni. Teo anivon’ ny tafik' i Oganda dia nisy fanoherana hafa.
Ny fitondran' i Yoweri Museveni[hanova | hanova ny fango]
Fanavaozana ara-pôlitika sy fanitsiana ara-toekarena[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ ny taona 1985 dia nanongam-panjakana ny jeneraly Tito Okello avy any Avaratra ka nahafaka an’ i Milton Obote izay nitady fialokalofana tany Zambia. Tamin’ ny volana Janoary 1986 dia nametraka ny mpitarika azy, Yoweri Museveni, ho filoham-pirenena ny NRA. Nanatanteraka fanitsiana lehibe tao Oganda ny fitodram-panjakana vaovao notarihin' i Yoweri Museveni. Nanampy azy ireo betsaka tamin’ ny famatsiam-bola ny fikambanana iraisam-pirenana maro. Ireo Aziatika voaroka tamin’ ny taona 1972 dia nasainy hiverina any Oganda indray. Nametraka ny firaisam-pirenena tsy anavahana foko tao amin’ ny fitondram-panjakana i Yoweri Museveni, nefa nanohitra ny fisian’ ny antoko maro.
Lany ho filoham-pirenena i Yoweri Museveni[hanova | hanova ny fango]
Lany ho filoham-pirenen’ i Oganda i Yoweri Museveni tamin’ ny tamin’ ny taona 1996. Nihatsara ny toekarena. Nisy koa ny fahombiazana teo amin’ ny lafiny ara-diplômasia. Izany rehetra izany dia nahatonga an’ i Oganda ho isan’ ireo firenena filamatra tao amin’ ny faritry ny Farihy Lehibe sy Afrika Atsinanana.
Nisedra olana ny fitondram-panjakana ogandey. Tao avaratra mantsy dia niatrika ny mpiady anaty akata ao amin’ ny Lord’s Resistance Army (LRA) (tarihin’ i Joseph Kony), izay fikambanana ara-pôlitika sy ara-tafika mifagaro fivavahana, ny fitondram-panjakana. Tsy mbola nisy ny famaritana ny fomban’ ny fanjakana ogandey na ho firenena tokana tsy mivaky (onitarisma) na ho fikambanam-panjakana isam-paritra maro mizaka tena (federalisma).
Ny fidirana an-tsehatry ny miaramila tany Repoblika Demôkratikan' i Kôngô[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny faramparan' ireo taona 1990 dia nanampy an’ i Laurent-Désiré Kabila amin’ ny fakana ny fitondrana i Oganda sy i Roanda (notarihin’ i Paul Kagame) amin’ ny fanoherana ny fitondran’ i Mobutu ao Zaira (Repoblika Demôkratikan' i Kôngô) tamin’ ny volana Mey 1997. Nanomboka tamin’ ny volana Aogositra 1998 anefa dia nivadika indray ny raharaha satria nanohana ny fikomiana nanoherana ny fitondran’ i Laurent-Désiré Kabila ny andian-tafika avy any Oganda sy Roanda. Taty aoriana, teo anelanelan’ ny taona 1999 sy 2000, dia nifanandrina niady koa i Roanda sy i Oganda tao Kisangani ao amin’ ny tapany avaratry ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Nohelohin’ ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny mpitondra tao Oganda noho ny nitsabahany tany amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, ka nihevitra ny hampitsahatra ny ady izay sady mandany vola no tsy nankasitrahin’ ny vahoaka. Tamin’ ny volana marsa 2003 no nandaozan’ ny andiany farany amin’ ny tafika ogandey ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô.
Fihenjanan' ny fitondrana sy fiharatsian' ny fandriam-pahalemana[hanova | hanova ny fango]
Lany indray ho filoham-pirenena tamin’ny 69,3 %n’ ny vato manan-kery i Yoweri Museveni tamin’ ny volana Marsa 2001. Niatrika fanoherana izay nitombo hatrany tao amin’ ny RRM ny filoham-pirenena ogandey. Ny ampahan’ io antoko io dia nitaky ny fisokafan’ ny sehatra pôlitika amin’ ny antoko maro sy ny fiadiana mahomby amin’ ny kolikoly. Noteren’ ny fianakaviambe iraisam-pirenena hampanjaka ny demôkrasia ny fitondran’ i Yoweri Museveni ka nampandany tamin’ ny alalan’ ny fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ ny volana Jolay 2005 ny famelana indray ny fisian’ ny antoko pôlitika maro. Ho setrin’ izany anefa dia nampanitsiany ny lalàmpanorenana mba hahafahany mirotsaka ho fidina fanintelony.
Fahalanian' i Yoweri Museveni mifanesy sy fangejana ny fanoherana[hanova | hanova ny fango]
Lany indray tamin’ ny 59,3 %n’ ny vato i Yoweri Museveni tamin’ ny fifidianana natao tamin’ ny volana Febroary 2006. Tamin’ izay dia 37,4 %n’ ny vato no azon’ i Kizza Besigye izay nirotsaka avy ao amin’ ny Forum for Democratic Change (FDC). Indimy lany ho filoham-pirenena i Yoweri Museveni: tamin’ ny 1996, 2001, 2006, 2011 ary 2016. Izany fahalaniany izany dia amin’ ny fihodinana voalohany avokoa, nefa maro ny miahiahy ny fisian’ ny hala-bato. Nanambara indray ny hanova lalàmpanorenana tamin' ny taona 2017 i Yoweri Museveni mba hanafoanany ny famerana ho 75 ny taona be indrindra ahafaha-milatsaka ho filoham-pirenena.
Jeografian' i Oganda[hanova | hanova ny fango]
Sarintany maneho ny farirta ao Oganda
Jeôgrafia fizika[hanova | hanova ny fango]
Ny vohon' ny tany sy ny rano[hanova | hanova ny fango]
Ny tendrombohira Ruwenzori
Manana velaran-tany mirefy 241 038 km² i Oganda. Any amin’ ny 1 200 m ny salan-kaambo misy azy noho izy firenena be lembalemba avo, eo anelanelan’ ny sampana roan’ny Rift Valley. Mitomandavana ao andrefana ny tangoron-tendrombohitr' i Ruwenzori izay manana ny tendrony avo indrindra mirefy 4 321 m.
Mandrakotra ny 15 %n’ ny velaran-tanin’ i Oganda ireo farihy ao aminy. Ao Oganda ny antsasaky ny velaran’ ny farihy Victoria. Hita ao Oganda koa ny farihy Kyoga sy ny farihy George, izay mandefa ny ranony ao amin’ ny ony Nily. Mamatsy rao ny farihy Edward, izay mamatsy koa ny farihy Albert, ny farihy George. Avy amin’ ity farihy farany ity ny ony Nily-Albert no manavasava an’ i Oganda hatrany Sodàna.
Manana toetany mafana sy mando nefa mangatsiatsiaka vokatry ny toerana avo misy azy i Oganda noho izy andalovan’ ny fehiben-tany. Miovaova eo anelanelan’ny 15,6 °C sy 29,4 °C ny hafanana ao amin’io firenena io. 20 °C ny sala-maripana any amin’ny faritra atsimo, ny any avaratra kosa dia 33 °C. Ny rotsak’ orana isan-taona dia eo anelanelan’ny 760 mm ao avaratra andrefana sy 1 520 mm ao akaikin’ny farihy Victoria (eo anelanelan’ny volana Marsa sy Jona, ary eo anelanelan’ny volana Novambra sy Desambra). Ny ao Gulu, any amin’ny 120 km atsimon’ny sisin-tany manasaraka amin’i Sodàna Atsimo, dia maina dia maina ny eo anelanelan’ny volana Novambra sy Febroary raha ampitahaina amin’ny fotona sisa amin’ny taona. Ny faritr’i Karamoja ao avaratra atsinanana no maina indrindra sady matetika ianjadian’ny hain-tany.
Ny mponina sy ny biby ary ny zavamaniry[hanova | hanova ny fango]
Ny biby sy ny zavamaniry[hanova | hanova ny fango]
Ny hivoka misy hazo maniry dia be velarana indrindra any amin’ny faritra atsimo ao Oganda, ny faritra afovoany sy andrefana dia rakotry ny ala mahalana sy ny ala tsy mbola nisy nikasika eny amin’ny tany avo ao Ruwenzori.
Maro ny karazam-biby miaina ao Oganda. Ny sasany amin’izy ireo dia arovana ao amin’ny valan-javaboarim-pirenena. Ny rajako simpanje sy ny gôrilin-tendrombohitra dia miaina anaty ala fa ny elefanta kosa, ny tokantandroka, ny biby miendrika osy (fr. : cervidés), ny liona ary ny leôparda dia miaina ao amin’ny hivoka.
Ny mponina ao Oganda dia niisa 24 200 000 tamin’ny taona 2002. Niisa 31 400 000 izy ireo tamin’ny taona 2008 ary manana hakitroka 157,1 mp/km². Niisa 38 000 000 izy ireo tamin' ny taona 2016. Ny taham-pahafatesan’ny zaza dia 66 ‰. Ny salam-pahaveloman' ny olona ao dia 52 taona.
Mizara ho vondrona ara-piteny sy ara-kolontsaina roa lehibe ny mponin’i Oganda. Ao ny Banto, izay mahatratra roa ampahatelon’ny mponina sy monina ao amin’ny tapany atsimo ao Oganda (ny Baganda, ny Baniankôle, ny Babiôrô ary ny Tôrô), sy ny mponina nilôtika izay monina ao avaratra (ny Akôly na Asôly, ny Karamônjônga ary ny Langô), ary ireo mpitsoa-ponenana roandey sy sodaney ary kôngôley.
Tsy manana sisin-dranomasina i Oganda sady tsy firy ny harena an-kibon’ny tany ao aminy. Ny shilling ogandey no vola ampiasain’i Oganda eo amin' ny taniny, ka ny Bank of Uganda, izay naorina tamin’ ny taona 1966, no manaparitaka izany. Maro koa ireo banky vahiny miorina ao Oganda.
Ny pôlitika ara-toekarena nataon’ ny filoha Yoweri Museveni, izay nahomby vokatry ny fahatsaran’ ny toetany tamin’ ny fiandohan’ ireo taona 1990, dia nahafahana nanatsara ny toekaren’ i Oganda. Izany dia niantsoan’ ireo firenena tandrefana azy ho filamatra. Ny taham-pitomboan’ ny toekarena dia niakatra 10 %, ary fiakatry ny vidim-piainana kosa dia 3 %. Izany ezaka izany anefa tsy nanala an’ i Oganda tsy ho isan’ ny firenena mahantra satria ny PNB dia 6,9 lavitrisa $ tamin’ ny taona 2004, izany hoe 300 $ ny salam-pidiram-bola isan' olona.
Mpamokatra kafe ao Oganda
Lohalaharana ny fambolena izay sahanin’ ny efatra ampahadimin’ ny mponina afaka miasa, sady miantoka ny 57 %n’ny PNB. Ny voly fihinana toy ny mangahazo sy ny tsaramaso no be mpisahana indrindra.
Ny landihazo sy ny kafe no voly fanondrana sady misahana ny 90 %n’ ny vola miditra amin’ ny alalan’ ny fanondranana entana isan-taona. Isan’ ireo firenena mpanondrana kafe be indrindra maneran-tany koa izy izay laharana faha-11 maneran-tany ary laharana faha-2 manerana an’ i Afrika tamin’ ny taona 2010 (ao aorian’ i Etiôpia). Laharana faha-2 manerana an’ i Afrika koa izy amin’ ny famokarana dite manaraka an’ i Kenia. Mamokatra fary sy landihazo (na hasy) ary vomanga koa i Oganda.
Mpiompy ondry Karamojong ao avaratra atsinanan'i Oganda
Ny biby fiompin’ ny Ogandey dia ahitana akoho amam-borona miisa 19 000 000 sy omby miisa 7 000 000 ary osy miisa 8 000 000 ary ondry miisa 1 600 000.
Ny angovo sy ny harena an-kibon' ny tany ary ny taozavatra[hanova | hanova ny fango]
Mamokatra akoranafo i Oganda ao amin’ ny farihy Albert ka solitany ny ankamaroan’ izany izay mahatratra 10 000 barily isan’ andro. Manana otrik’ angovon-drano lehibe, izay miantoka ny famokarana herin’ aratra, i Oganda. Mamokara herin’ aratra ny tohadrano eo amin’ ny rian-dranon’ i Owen eo amin’ ny onin’ i Nily. Misy solitany ny ao amin’ ny farihy Albert. Misy koa ny varahina sy ny kôbalta izy mbola tsy misy mpitrandraka.
Ny taozava-baventy izay mivangongo ao amin’ ny toerana voafaritry ny telolafy Jinja-Kampala-Toroo dia mifantoka indrindra amin’ ny famokarana zava-pihinana avy amin’ ny fambolena. Tamin’ ny taona 2003 dia ny 7,6 %n’ ny mponina afaka miasa no nisahana izany.
Ny famokarana kitay dia any amin’ ny 15 000 000 m³ ka ny 85 % dia ampiasaina amin’ ny fadrahoana sakafo. Ny hazo fanaovam-panaka sy fanorenana aondrana any ivelany dia ny akazo.
Fifanakalozana sy fitaterana[hanova | hanova ny fango]
Ny fifanakalozana amin’ny any ivelany[hanova | hanova ny fango]
Ny mizana ara-barotra dia mitontongana any amin’ ny trosa. Ny vokatra fanondrana voalohany dia ny kafe. Manondrana landihazo sy dite maro koa i Oganda. Avy any amin’ ireo firenena mandroso ny ankamaroan’ ny entana hafaran’ i Oganda, ka isan’ izany ny lamba sy ny entana momba ny tao vy ary ny kojakoja momba ny fitaovam-pitaterana. I Kenia, i Etazonia, i Britaina Lehibe ary i Alemaina onmpiara-miombona antoka ara-barotra amin’ i Oganda.
Ny fifamoivoizana[hanova | hanova ny fango]
Fiaramanidina ao amin'ny Uganda Airlines
Vakivakin’ ny arabe mirefy 8 000 km sy lalan-kely mirefy 22 100 km i Oganda. Mirefy 259 km ny lalam-by izay mampitohy an’ i Oganda amin’ i Kenia mankany amin’ ny Ranomasimbe Indiana. Misy sambo maro mivoivoy eny amin’ ny farihy Victoria sy miantoka ny fifandraisana amin’ ireo seranan-tsambon’ i Kenia sy i Tanzania. Ny orinasam-pirenena misahana ny fitaterana ana habakabaka dia ny Uganda Airlines izay manala fahasahiranana ny ao Entebbe indrindra. Tamin’ ny taona 1997 dia namorona pasipaoro (fahazoan-dalana) iraisana ho an’ ny mponin’ izy ireo i Oganda sy i Kenia ary i Tanzania mba hampandrosoana ny fampiraisana ny toekarena ao amin' ny faritry ny Farihy Lehibe izay nokendrena ho tanteraka tamin’ ny taona 2000.
Olona telo mitaingina boda-boda
Mampiavaka an' i Oganda ny fitaterana amin' ny alalan' ny môtô nohalavaina atao hoe boda-boda.
Kolontsaina ao Oganda
↑ “Ouganda” ao amin’ny Microsoft Encarta 2006
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Oganda&oldid=1040815"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:20 ity pejy ity.